ဟန်းဆက် ဝယ်ကြဦးစို. ရဲ. | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » ဟန်းဆက် ဝယ်ကြဦးစို. ရဲ.
Posted by ထိပ်တင် တုတ်ကြီး on Jul 24, 2012 in Copy/Paste | 18 comments
ကဲ ဒီကနေ.တော. ပြောင်းလဲလာတဲ. ခောတ်စနစ်ကြီးနဲ.အတူ မြန်မာ.ဆက်သွယ်ရေး ရဲ. အကြိမ်ကြိမ် အခါခါ အနိုင်ကျင်.ခြင်းတွေထဲက နောက်ဆုံး latest version ထွက်လို.လာပြန်ပြီကော။ အနိုင်ကျင်. ခံတော်မူလိုက်ကြပါဦး ရောင်းရင်းများ။။။ ဒီတခါ နိုင်တော်မူခံရမယ်. သူတွေကတော. CDMA ၄၅0 MHz သုံ့းစွဲနေသော ပုဂ္ဂိုလ်များ ပင်တည်း ။ အနှီ ပုဂ္ဂိုလ် များသည်ကား ယနေ.အချိန်ထိ CDMA ၄၅0 MHz ဖုန်းများ ဖြစ်တဲ. ၀၉၄၇——။ ၀၉၄၉——။ ၀၉၆၅—–။ ၀၉၆၈—–။ အစရှိတဲ. ဖုန်းအမျိုး အစားကဒ်တွေကို မြို.ကြီးတွေမှာ ၈၀၀ MHz ဟန်းဆက်တွေထဲ ကို ထည်.ပြီး အသုံးပြုနေသူများ ဖြစ်ကြပေလိမ်.မယ်။ ကဲ– အခုတော. ဆက်သွယ်ရေး ရုံးတွေမှာ ရှိတဲ. CDMA အိတ်ချိန်းတွေရဲ.( ရီဒန်တန်စီ) ဆိုလား။ ပြောရ၇င်တော.ဗျာ MHz နှစ်မျိုးစလုံး သုံးလို. ရတဲ. အနေအထား ကနေ ၄၅၀ MHz သမားက ၄၅၀MHz ဟန်းဆက် သာ သုံးလို.ရမယ်.အခြေ အနေ ကို ပြောင်းလဲပစ်လိုက်ပါပြီ။ အရင်က ၈၀၀ MHz ရဲ. Network က သုံးစွဲ တဲ.လူ နည်း လို. လိုင်းချောင် ပြီး ခေါ်ရလွယ်တာကြောင်. ရယ်၊ ဆသရ က သုံးလို.ရအောင် ဂွင်ဆင်ထားတာရယ်ကြောင်. ၈၀၀ MHz ဟန်းဆက်တွေထဲ ထည်.သွင်းအသုံးပြုနေတဲ. ကိုကို၊မမ၊ ဦးဦး၊ ဒေါ်ဒေါ် တို.ရေ နိတ္ထိ တန်ပြီ ဖြစ်ပါကြောင်း ရယ်နှင်. CDMA ၄၅၀ MHz ဟန်းဆက်များ ရှာဝယ်ရင်း ငွေကုန်တော် မူကြစေ။။။။။။ နှောင်–ဝေါင်–ဝေါင် ။။။
တရုပ် ဟန်းဆက်တွေက ခဏခဏပျက် အကောင်းစါးကြတော့ဝယ်မကိုင်နိုင် ဆက်သွယ်ရေးကပါ ထပ်နှိပ်စက်ပြန်တော့ သြော် ဘဝဘဝ လူဖြစ်ရတဲ့ဒုက္ခ။
As mobile devices proliferate, wireless networks are edging near capacity —apotential threat to price, performance, and innovation.
Computerworld – Wireless bandwidth is like land in Manhattan — it’s extremely valuable because they’re not making more of it.
And Mobile Future,acoalition of vendors and consumers, estimated inaMarch 2011 report that by 2014, voice traffic will comprise only 2% of the total wireless traffic in the United States —aworrisome statistic because, as the report noted, smartphones consume 24 times more data than old-school cell phones, and tablets consume 120 times more data than smartphones. (See Data needs bandwidth, but how much? for details.)
လူတွေ ဆဲလ်ဖုန်းအသုံးများလို့.. လေထဲက မမြင်ရတဲ့.ဒေတာဘန်ဝတ်ပ်လိုင်းတွေ.. ပြည့်ကုန်ကြပ်ကုန်တာလား.. ?
ကျွန်တော်သိတာကတော့…. အရင်က ၆၅၀.နဲ့စတဲ့ဖုန်းတွေ ဟန်းဆက်က မြို့တွင်းသုံဟန်းဆက်က တမျိုး.. မြို့ပြင်သုံးဟန်းဆက်က တမျိုးလိုရှိခဲ့တယ်။
အဲဒီဖုန်းတွေကို တလောက အင်တာနက်ချိတ်ရအောင် ( အင်တာနက်ချိတ်ရအောင်ဆိုတာ… လက်ဖက်ရည်ဆိုင်မှာ သူများအင်တာနက်ကို ၀ိုင်ဖိုင်သုံးလို့ရအောင်ပြောတာနော်) ဟန်းဆက်တစ်ခု ၀ယ်ပြီးတတ်လိုက်တယ်။ ၁=လလောက်ပဲရပြီး ခုမရတော့ဘူး… ဟန်းဆက်ပြန်လဲရမတဲ့…
နောက်ပြီး ကဒ်စနစ်ကိုပြောင်းလဲသုံးလာတာ ကဒ်တောင် နှစ်ခါရှိနေပြီ… ခုအရင်ကြွေးကျန်ရှိလို့ဆိုပြီး လိုင်းဖြတ်ပြစ်ပြန်တယ်။
ကြွေးက ၂၅၀၀..ဆိုလားကျန်တာ…. ၁၀၀၀၀..ဆောင်ခဲ့တဲ့။
မေးရင်တော့လဲ ရှင်းပြတယ်။ ဒါပေမယ့် တခုမှ နားမလည်ဘူး… ကဒ်မလဲခင်းလေးကိုလဲ ကဒ်လဲတော့မှာဆိုလို့ ဆိုပြီး ငွေသွင်းရတယ်။
ကျွန်တော့်မိတ်ဆွေ ဖုန်းကျတော့ ငွေတသိန်းကျော် သူ့တို့ဆီကျန်နေတယ်။ မပြောချင်ပါဘူးဗျာ…
၁၅=သိန်းပေးခဲ့ရတဲ့ဖုန်းတွေ… အခုဟန်းဆက်ဖြစ်တာလဲ အဲဒီ ၁၅=သိန်းတန်ဖုန်းတွေပဲ။
ပြီးတော့ ၁၅=သိန်းတာပေးခဲ့ရတာ.. အင်တာနက်ချိတ်မရဘူး။ ဟန်းဆက်ကလဲ မြို့တွင်းတပုံစံ… မြို့ပြင် တပုံစံတဲ့။
နောက်ပြီး ၆၅၀-ကိုင်တဲ့ဖုန်းသမားတိုင်း အကုန်လုံးဖြတ်ပစ်တာ… တကယ်ရက်စက်တယ်။
ဒီတစ်ခါတော့ အူးဇင်း တရား မရတော့ပါလား .. ရက်စက်တယ်ကြီးအော်နေတော့တယ် ..
ဒါကတော့ ငါ့ အမေကိုးကွ ဖြစ်နေပြီထင်တယ် … :grin:
cdma ၄၅၀ MHz(15 သိန်း) ဖုန်းသမားတွေက ခံရတော်တော်ခက်မှာ။ Internet လဲမရ သူ့အတွက်လာတဲ့ handset ကလဲလှလှပပ ကောင်းကောင်းမရှိနဲ့လေ။ ကျွန်တော့သူငယ်ချင်းဆို Internet သုံးချင်လို့ wcdma တစ်လုံးထပ်ဝယ်ရတယ် အော်နှစ်ခါကုန်တော့တာပဲ သူ့ခမျာ
ရူးပါပြီဗျာ ၄၅၀ mhz ဟန်းဆက်တွေကအရမ်းဈေးကြီးတာ
GSM ဟန်းဆက်တွေက အနည်းဆုံး နှစ်သောင်းတန်ဝယ်သုံးလဲအဆင်ပြေတယ်
၄၅၀ တွေက အနည်းဆုံး ခြောက်သောင်းလောက်မှ သုံးလို့်ရတယ်
ကျွန်မသိထားတာတော့ CDMA800MHz ဖုန်းတွေက … အပြင်ယူလို့မရဘူး .. နယ်ကျော်လျှင် 450MHz ဟမ်းဆက်လဲရတယ်ပဲ ကြားဖူးတယ် …. ။ အခုက ပြောင်းပြန်လိုပဲ … 800 ဟမ်းဆက်ထဲ 450 ထည့်တယ်ဆိုတာကိုပါ …. ။
ဖုန်းတွေ ပေါလာတာနဲ့ အတူ .. တရုတ်ဟမ်းဆက်ဈေးကွက်တွေလည်း အတော်အရောင်းသွက်တယ် … ။
တရုတ်ဖုန်းထဲမှာမှ HUAWEI နဲ့များ စာချုပ်ချုပ်ထားသလားမှတ်ရတယ် …. ။
ကျနော့်အဖြစ်က ပိုဆိုးပါ၏။(၁၅)သိန်းCDMAသမားတွေပြီးရင် ကျနော်တို့ (၅)သိန်းတန်
450Mhzသမားတွေဘဲ။သူများတွေက ဖုန်းလေးပွတ်ပြီး အင်တာနက်သုံးပြ၊Maps ကလေးသုံး၊
အဲ့ကြားထဲ လိုင်းဆွဲအားကောင်းအောင် ဝယ်ကိုင်ရတဲ့ ဟန်းဆက်ကလဲ မနည်းတော့ဘူး။
ပထမတော့ ZTE G-500၊နောက်တခါ ZTE p21၊ခုတခါတော့ HUAWEI c830eနဲ့ ဘိတ်ဆုံး
wint war aung says:
မှန်ပါတယ်အခုလည်း 450 MHz ဖုန်းကိုင်ထားတာပါ…800 ဟန်းဆက်နဲ့ မရတော့လို့ ဒုက္ခတော်တော်ရောက်ရပါတယ်….လိုင်းဆွဲတဲ့ဖုန်းကျပြန်တော့လည်း..ဒီဇိုင်းမှတော့တော်တော်အဆင်မပြေတာပါ….450MHz တွေအတွက်တစ်ခုခုလုပ်ပေးသင့်တယ်လို့ ထင်ပါတယ်
မတရားမှန်းသိနေတာတောင် ဘယ်လိုတုံ့ပြန်ဘို့ မပြောဘူး
အားငယ်နေလိုက်ကြတာ ကျုပ်တောင် မျက်ရည်တွေထွက်ခြင်လာဘီ
ကျုပ်ကတော့ ဘာဖုံးမှ မဝယ်သုံးနှိုင်လို့ ဘာမှမခံစားရပါဘူး
ကျုပ်များခင်ဗျားတို့လို ဖုံးသုံးနှိုင်လို့ ကျုပ်ကို ဒီလိုလူဘားလာဝ
အဲ့သည်ရုံးကို အနည်းဆုံး ဂဲနဲ့ထုဒယ်
အဲဒါ ကိုအောင်ပု ဖုန်းပြင် တတ်ရင်တော့
သြော် လောက လောက
ကော်ဖုန်းက စကားပြောလို့ရလားမမနိုရာ စနိုးလည်းကော်ဖုန်းဘဲကိုင်တော့မယ် ဟိဟိ။။
ဘာဖုန်းမှ မကိုင်လေတော့ ဘာမှမသိ ဘာမှမခံစားရဘူး
အ၀င်ပဲရပီး အထွက်မရလို့ဒဲ့ ……..
ဟုတ်…ဟုတ်…. ဟုတ်ကဲ့ ။
ဟုတ်ပါ့ဗျာ…အရင်ကဆို…ဘားအံကနေ ရန်ကုန်လာရင် လှည်းကူးလောက်ဆိုရင် လိုင်း(၃)တုံးလောက် မိသေးတယ်…အခု(၁)တုံးတောင်အနိုင်နိုင်…(450 MHz)တွေ အသုံးမကျပုံများ…မြ၀တီကိုသွားလည်တော့ ရန်ကုန်ကသူငယ်ချင်းက ဖုန်းဆက်တော့ နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်ဆိုပြီးတော့ လိုင်းပိတ်ထားတယ်ဗျ…ဆက်သွယ်ရေးကိုမေးတော့ ဟိုဌာနမေးရမလို…ဒီဌာနမေးရမလိုနဲ့ ဖြေတယ်ဗျ..ဖုန်းလိုင်းတွေအားလုံးထဲမှာ (450MHz)က ဘေးရောက်နေတာပဲသိတယ်…ရန်ကုန်ထဲမှာလည်း ပြောနေရင်း ဖုန်းလိုင်းပြုတ်ပြုတ်ကျနေတယ်…၀ယ်မိတာမှားပေါ့….